ဘဝမှတ်တိုင်: samsung deadboot error
samsung deadboot error
မင်္ဂလာပါ ဒီနည်းလမ်းလေးက hardware ထိမထားတဲ့ S3 dead boot ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော် သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ box ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများက box နဲ့ လုပ်ပါ မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ power supply နဲ့ ချိတ်နိုးပါ။ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကိုအရင်းဒေါင်းလိုက်ပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုတော့ နှစ်နည်းလုံးကို အောက်မှာ တဆင့်ချင်းပြောပြပါ့မယ်။
အလကားရတယ်လွယ်လွယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ဆိုပြီး ဈေးကွက်ကိုမဖျက်စီးဖို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော် စာတွေ အများကြီးရေးပြီး တင်ပေးတာလေး ထောက်ထားပေးပါ။
Samsung S3 boot card maker
I9300 Repair efs
S3 boot card လုပ်ရန်အတွက် sd card 4G လောက်ကို format ရိုက်ပြီး cardreader ထဲပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပေးပါ။ boot card maker ကို ဖွင့်ပြီး အထဲက ပြထားသောဖိုင်လေးကို admin mod နှင့် run ပေးပါ မိမိကဒ်ကိုပြပေးနေသောနံပါတ်ကို ရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နံပါတ်4ကိုနှိပ်ပေးပါ။ အချိန်ခဏလေးအတွင်း boot card လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။
power supply နဲ့ နိုးမဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ boot card ကိုထည့်ပါ jig ကို ထပ်ပါ power supply နဲ့ နှစ်မိနစ်လောက်ချိတ်ပေးထားပါ။ hardware အပျက်အစီးမရှိဘူးဆို တတ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က box နဲ့နိုးတဲ့နည်းနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Teraterm4.78 ကိုဖြည်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ အထဲမှ ttermpro.exe ကို run ပါ။ box ကျလာရင် serial ကိုရွေးပြီး prot မှာ Z3X BOX Serial port ကိုေ၇ွးပါ။
box တစ်ခုထပ်ပေးလာရင် setup ထဲက serial port ကို ရွေးပေးပါ။
setting ကို အောက်က ပုံထဲအတိုင်းထားလိုက်ပါ။
battery ကို အားအပြည့်သွင်းထားပါ Z3x နဲ့ နိုးမဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ မိမိ လုပ်ထားတဲ့ boot card ကိုထည့်ပါ။
Uart cable via z3x box ကိုချိတ်ပါ။
battery ထည့်ပြီး ttermpro နှိပ်ပေးပါ 5min လောက်ဆောင့်ပေးပါ မရရင် ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
process တွေ သွားနေပါလိမ့်မယ် ကြိုးကိုလုံးဝမဖြုတ်ပါနဲ့
pit_check_integrity: invalid pit.(0x0)
update_guid_partition_table: There is no pit binary.
fsd_reclaim 1283: MST is not recognized(mst.magic=0x0)
fsd_reclaim 1284: MST is not recognized
fsd_reclaim 1599: Error(nErr=0x0)
fsd_reclaim 1604: j4fs_rw_start is set to default value(128KB)
j4fs_open 153: Error(nErr=0x40000000)
j4fs_read_file_bootloader 355: j4fs panic
load_j4fs_param: 'param.j4fs' does not exist, make new one..
j4fs_write_file_bootloader 184: j4fs panic
load_j4fs_param: debug level file does not exist..*INCORRECT!*
init_fuel_gauge: battery is not detected, do not init fuelgauge
init_microusb_ic: MUIC: CONTROL1:0x1b
init_microusb_ic: MUIC: CONTROL2:0x3b
init_microusb_ic: MUIC: CONTROL2:0x3a
PMIC_ID = 0x2
PMIC_IRQSRC = 0x0
PMIC_STATUS1 = 0x10
PMIC_STATUS2 = 0x0
PMIC_PWRON = 0x2
PMIC_IRQ1 = 0x27
PMIC_IRQ2 = 0x0
s5p_check_keypad: keypad value=0x0
s5p_check_reboot_mode: INFORM3 =0... skip
s5p_check_upload: MAGIC CODE=d1b0f038
microusb_get_attached_device: STATUS1:0x3c, 2:0x0
s5p_check_download: update mode=0
s5p_check_tzsw: invalid tzsw type! dummy?
scr_draw_image: draw 'download_error.jpg'...
read_param_file: 'download_error.jpg' j4fs read failed!
fimd_div:13, div:1, FB_SOURCE_CLOCK:800000000, FB_PIXEL_CLOCK:57153600
a2, 60, 90,
[DVFS] INT(1) : 0
DRAM Type : LPDDR2 8G
[DVFS] MIF(3) : 0
[LOCK SW/HW]ARM:0/0 INT:0/0 G3D:0/0 MIF:0/0 SHIFT:0/0
[DVFS] ARM(0) : 5
[DVFS] G3D(2) : 0
SD_READ: 20000 20000 0x40008000 -> 668484 usec
Inp32(uAddr) : 0xea00007e
[Patch Stop] This is not Rom Code.
ပေါ်လာရင် အောင်မြင်လာပြီး download mode ဇောက်ထိုးကြီးနဲ့ ဖုန်းမှာ ပေါ်လာပါပြီ
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ odin နဲ့ firmware ရေးပါ့မယ်။
firmware ပြန်တတ်လာရင်တော့ imei null နေပါပြီး imei null ကို ပြန်ရန်အတွက် cf auto နဲ့ root အရင်ကစ်လိုက်ပါ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ I9300 Repari efs ကို flash လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
imei အမှားကြီးအနေဲ့ တတ်လာပါပြီ အဲဒါကို ပြင်ဖို့ အတွက် Samsung Tool ကိုအသုံးပြုပြီး အောက်က ပုံထဲက အတိုင်း ပြင်ပေးလိုက်ပါ အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါခင်ဗျာ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေတယ်ဆိုရင် လည်း ဆက်လက်ကြိုးစားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
CREDIT ...TO......... KO KO WYNN PYAY.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/03/2014 09:38:00 am
Sai Min Thiha Aung 16 February 2016 at 05:12